टिकटकमा रम्दै एमाले नेत्री रामकुमारी झाँक्री (भिडियो सहित) - Nepali in Australia
टिकटकमा रम्दै एमाले नेत्री रामकुमारी झाँक्री (भिडियो सहित)
March 17, 2021 autherLeaveaComment on टिकटकमा रम्दै एमाले नेत्री रामकुमारी झाँक्री (भिडियो सहित)
रामकुमारी झाँक्री वा,मपन्थी युवा नेतृ हुन्। उनी ने:पाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) निकट अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनिय:न (अनेरास्ववियु)को अध्यक्ष भैसके:की छन्। उनको जन्म २०३४ सालमा गुल्मीको मया’ल पोखरी गाविस १ रत्नबहादुर र रनकुमारीकी छोरीका रूपमा भएको हो। उनले २०६६ माघ २९ मा धनकुटा जिल्लाका पशुपति’बाबु पुरीसँग विवाह गरिन्।
रामकुमारीको जीवनी ‘महिलाहरू कुनै पनि संगठनको नेतृत्व तहमा दाबी गर्दैनन्, गरिहाले पनि काम गर्न सक्दैनन्,’ एमाले विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुको अध्यक्ष हुनुभन्दा पहिले रामकुमारी झाँक्रीलाई यस्ता कुरा खूब सुनाइन्थ्यो । नेपाली राजनी:तिको इतिहासमा महिलाले राजनीतिक संगठन (महिला विभागबाहेक)को मुख्य पदमा रहेर काम गरेको उनले पनि भेटेकी थिइनन् । ‘समाज रूपान्तरण सम्भव छ’ भनेरै राजनीतिमा लागेकाहरू:को पनि यस्तो मानसिकता देखेर रामकुमा’रीलाई अचम्म लाग्थ्यो ।
चारै दिशाबाट आउने मनोबल गिराउने प्रसंग कुल्चेर हिम्मतसाथ उनले नेपाली राजनीतिमा एउटा इतिहास बनाइन् । दलहरूका भ्रातृ संगठनमध्ये पनि सबैभन्दा जुझारु मानिने विद्यार्थी संगठनको अध्यक्ष भएर देखाइन् । त्यति मात्रै होइन, आफूले नेतृत्व गरेको संगठनलाई २०६५ सालको स्ववियु चुनावमा पनि पहिलो संगठन नै बनाइन् ।
२०६२÷०६३ को जनआन्दो लनमा रामकुमा’री झाँक्री युवा विद्यार्थीको नेतृत्व गर्दै सडकमा पुगिन् । दुईपल्ट उनको टा उकोमा गहिरो चो ट लाग्यो । गिरफ्तार हुने र छा:डिने क्रम राजाले प्रत्यक्ष शासन हातमा लिएदेखि जनआ:न्दोल सफल नहुञ्जेल नियमित’जस्तै बन्यो । तर, रामकुमारी आन्दोलनको अग्रमोर्चाबाट कहिल्यै पछाडि हटिनन् ।
त्यतिबेला सफल आन्दोलनमध्ये पर्ने रिङरोड घेरा उ, बानेश्वरको आन्दोलन रामकुमारीकै ‘डिजाइन’मा भएका थिए । २०५९ सालमा प्रत्यक्ष शासन राजाले हातमा लिएपछि कहीँ विरोध कार्यक्रम नभए पनि पीके क्या:म्पसमा हुन्थ्यो । र, त्यसको अगुवाइ रामकुमारीले गरेकी हुन्थिन् ।
गुल्मीको पुर्काट गाउँमा जन्मिएकी रामकु’मारी स्कुलमा ‘अगुवा विद्यार्थी’ थिइन् । गीत गाउने र नाँच्ने बाहे’कका कार्य:क्रममा उनको उपस्थिति हुन्थ्यो । २०४६ सालको आन्दोलनका लागि स्थानीय’लाई तयार गर्ने क्रममा उनको कानमा पनि प¥यो, ‘गाउँ समाजमा रहेको यो अस:मानता सही राजनी:तिक व्यवस्था र विचारले मात्रै हटा’उन सक्छ ।’ असमान ज्याला, हेपाहा प्रवृत्ति उनलाई मह’सुस भइसकेको थियो ।
त्यसैले सानै उमेर भए पनि छया’लिस सालको आ न्दोलनमा उनी पनि सहभागी भइन् । बहुद’लीय प्रजातन्त्रको स्थापनापछि २०४७ साल वैशाख ९ गते उनकै जिल्लामा आयोजित एक राजनी’तिक कार्य’क्रममा महिला वक्ता जरुरी भयो । वक्तृत्वकला र वादविवाद प्रतियो:गितामा भाग लिइरहने रामकु’मारी उनीह’रूको नजरमा परिन् । सात कक्षा पढ्दै गरेकी उनले वाक्कला प्रस्तुत गरेपछि धेरैले उनको क्षम:ताको तारिफ गरे ।
रामकु’मारीलाई लाग्यो, ‘यो सही बाटो रहेछ ।’ स्कुलमा आफ्ना संगठन विस्तार गर्ने क्रममा तत्कालीन माले (अहिलेको एमाले) ले उनी अध्य’नरत स्कुलमा अनेरास्व’वियुको संगठन बनायो । उनी सह–सचिव भइन् । इलाका अध्यक्ष, जिल्ला सदस्यसम्म हुँदा उनको एसएलसी सकियो । जिल्ला:मा महिला जुझारु नेत्रीको पहिचान बनाइस’केकाले स्थानीय नेताहरू उनलाई जिल्ला’कै क्या’म्पसमा पढोस् भन्ने चाहन्थे ।
तर, उनी उच्च शिक्षा’का लागि काठमाडौँ आइन् । गाउँकै सा:थी पद्मकन्या क्याम्पस पढिरहे:काले उनी पनि त्यतै रमाइन् । नयाँ विद्यार्थीलाई स्वागत गर्ने कार्यक्रममा नयाँ विद्या:र्थीका तर्फ:बाट धन्यवाद दिने व्यक्ति खोज्दा झाँक्रीले हिम्मत गरिन् । पद्मकन्याका विद्यार्थी’माझ उनको बोल्न शैलीको प्रभाव जम्यो ।
उनी अनेरास्व’वियुमा विभिन्न पदमा निर्वा:चित हुँदै अध्यक्षसम्म पुगिन् । ‘म पद ओगट्न मात्रै होइन, काम गर्न आएकी थिएँ । त्यसैले म अध्यक्ष भएकै बेला मिनी जनमतसंग्रह नै मानिने स्ववि’यु चुनाव हुँदै थियो । त्यसका लागि रातबि’रात नभनी खटिएँ,’ उनी भन्छिन्, ‘यो देशको रूखपात नै माओ:वादी हो कि भन्ने भएका बेला मैले सं’गठनलाई पहिलो बनाएँ ।’
टिकटकमा रम्दै रामकुमारी झाँक्री; तल भिडियोमा हेर्नुस:
नेपालकै नमुना काठमाडौं वर्ल्ड स्कुल, धनीका छोराछोरीदेखि विदेशी विद्यार्थीसम्मको आकर्षण
बुटवलमा भेटिएका १०० भन्दा बढी आवाज निकाल्ने मदन ! रबी लामिछानेको क्यारि`केचर गर्दै, सबैलाई चकित पारे
October 18, 2020 auther
भाइरल चियावाली सृस्‍टिको कहानीले जो कोहीलाई रुवाउछ, श्रीमानले दिएका पिडा सम्झिदै भाबुक भईन, अब यस्तो नया काम गर्दै चियावाली
March 29, 2021 auther
निषेधाज्ञाका बीच नेपाली सेनाको यस्तो कडा निर्देशन, सबै तयारी अवस्थामा रहनु !
May 6, 2021 auther